အမျိုးသမီး Archives - Page2of 217 - Focus Myanmar
အခြားအလားတူဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ကာရစ်ဘီယံရှိ မူဇက်ဖာပါဆေးရုံတွင် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤဒေသတွင် လည်း မူလကသွား သွားလာလာဆော့ကစား နေသည့် ကလေး အများအပြား ရုတ်တရက် ဝက်ရူးပြန်သကဲ့သို့ တက်ပြီး အချို့မှာ သေဆုံးသွားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာကြည့်သောအခါ ထိုကလေးများသည် အက်ကီး ခေါ် အသီးတစ်မျိုးကိုစားပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ရင် သင်သိသင့်တဲ့အချက်များ 💘
ဘယ်လောက်ပဲ စီးပွားရှာ တတ်ပါစေ…
မောပန်းလာရင် သူအရင်ဆုံး ရှာတာက သူချစ်သူ လက်မောင်း တဖက် ဖြစ်တယ်….
ဘယ်လောက်ပဲ သူ့ခြေပေါ် ရပ်တည်နိုင်ပါစေ…
သူ့ချစ်တဲ့ ယောင်္ကျားရှေ့ ကလေးလို ကပ်ချွဲချင် တတ်ကြတယ်…
မိုးရာသီမှာ မခြောက်တဲ့အဝတ်တွေ အနံ့မထွက်အောင် အဝတ်လျော်နည်း
၁- အဝတ်လျော်စက်ထဲမှာ ကြာရှည်ထားခြင်း
အဝတ်တွေကို အဝတ်လျော်စက်ထဲမှာ (သို့) ခြင်းတောင်းထဲမှာ ကြာရှည်စွာမထားသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်လျော်ပစ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။
၂- အနံ့ပိုကောင်းသော အဝတ်လျော်ဆပ်ပြာအသုံးပြုပါ
အဝတ်လျော်ဆပ်ပြာတွေမှာ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင် ၊ ရနံ့မွေးကြိုင်အောင် ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကို သုံးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆပ်ပြာ၇ဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေမှာ သံပုရာ၊ နှင်းဆီ တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ အဝတ်လျော်ဆပ်ပြာမျိုးကို သုံးသင့်ပါတယ်။
👧 အပျိုအမျိုးအစား (3) မျိုး
(1) အပျို 💘
အပျို ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။ အားလုံး သိကြမှာပါ ။ အပျိုဆိုတာ အိမ်ထောင် မရှိသေးတဲ့သူ၊ တရားဝင် လက်မထပ် ရသေးတဲ့ သူဟာ အပျိုပါပဲ။ အိမ်ထောင်မရှိဘူး လက်မထပ် ရသေးဘူး ဆိုပေမဲ့ ချစ်သူလဲ ရှိခဲ့ ဖူးချင် ရှိခဲ့ဖူးမယ်။ ချစ်သူ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာတောင် သမီးရည်းစား ဆိုတဲ့ အခြေအနေ တွေထက် ကျော်လွန်ခဲ့ရင်လဲ ကျော်လွန်ခဲ့မယ်။
ကျောက်ချဉ်ရေဖြင့် ဆေးကြောခြင်းက မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါကို ကျဉ်းစေ
အမျိုးသမီးများ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းတို့က မိန်းမကိုယ်ကျယ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းပါပဲ။ မိန်းမကိုယ်ကျယ်ြခင်းကြောင့် အိမ်ထောင်မှုသုခ မပြည့်စုံမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလွယ်နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျောက်ချဉ်အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းပါပဲ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက် အပျိုစစ်မစစ် တကယ်ပြောနိုင်လား ???
ဒီကိစ္စက ယောင်္ကျားလေးတွေကြားမှာ တော်တော်အပြောများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျိုစစ်မစစ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာက တကယ်ရော ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။ ပြီးတော့ အပျိုစင်မိန်းကလေးနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အတူနေရင် သွေးထွက်တယ်ဆိုတာကရော ခိုင်လုံတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သလား။
အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေး တွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက်
အရပ်ပုလို့ အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိ
တတ်ကြပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက်ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေး
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေ အတွက် သတိပေး လက္ခဏာတွေကို လျစ်လျူရှု မထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလက္ခဏာတွေကို အစောပိုင်း အဆင့်ကတည်းက သိနားလည်မှသာ ကုသမှု ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။